Baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodi doona dhiibistii Qalbi-dhagax - BBC Somali
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodi doona dhiibistii Qalbi-dhagax
Image caption Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay xildhibaanada Golaha Shacabka ee Soomaaliya ka doodaan go'aankii 6-dii bishan ka soo baxay golaha wasiiradda ee xukuumadda Soomaaliya ee lagu dhiibay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi-dhagax.
Xildhibaanada Soomaaliya ayaa arrintan si weyn ugu kala ra'yi duwan, iyadoo qeyb ka mid ah xildhibaanadu ay taageersan yihiin go'aanka xukuumadda oo ay sheegeen inay aheyd tallaabo sax ah halka kuwa kale ee ka soo horjeeda ra'yigaasna ay go'aanka Golaha Wasiirada ku tilmaameen inuu ahaa khiyaamo qaran.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa yeelanaya kulankoodii ugu horreeyay tan iyo fasaxii ciidda, waxaana lagu wadaa in dood kulul ay dhex mari doonto iyadoo dhinac walba uu soo bandhigi doono dooddiisa.
Arbacadii ayey aheyd markii Golaha Wasiirada Soomaaliya ay si aqlabiyad ah ku go'aansadeen in dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu ahaa mid loo maray sharciga.
Goluhu waxa uu sheegay in Qalbi Dhagax uu ahaa shakhsi ku howlanaa falal lidi ku ah ammaanka Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo gacan saar la lahaa kooxda Al-Shabaab.